Google waxay soo bandhigi doontaa taleefanadeeda casriga ah 4ta Oktoobar | Wararka IPhone
Wax badan ayaa laga sheegay qorshayaasha mustaqbalka ee Google ee adduunka casriga ah. Waxay u muuqataa in shirkadda Mountain View ay leedahay waxaa loo qorsheeyay sanadka soo socda in la bilaabo soo saarista boosteejooyin u gaar ah, Joojinta ku tiirsanaanta soo saarayaasha kale maadaama ay ilaa iyo haatan sameysay heerka Nexus. Telefoonada casriga ah ee shirkadu soo bandhigi doonto 4-ta bisha October ayaan mar dambe ku hoos jiri doonin magaca Nexus, laakiin Google ayaa ugu magac dartay Pixel. Heerka cusub ee Pixel wuxuu na siin doonaa laba nooc: mid 5-inji ah iyo mid kale oo 5,5-inji ah, oo wata magaca Pixel XL mar labaadna waxaa soo saaray Taiwanese-ka reer HTC.
Pixel iyo Pixel XL labaduba waxay na tusi doonaan astaamo aad iskula mid ah iyo halka khilaafaadka ugu weyn laga heli doono cabirka shaashadda, halkaas oo nooca yar uu na siin doono 5 inji halka nooca XL uu noqon doono 5,5 inji. Labada moodelba wuxuu ku dari doonaa dareeraha faraha ee gadaasha gadaal taabasho taabasho leh taas oo noo oggolaan doonta inaan ku qabanno shaqooyin kala duwan qalabka. Labada noocba waxay ku dhufan doonaan suuqa Android 7.1, taas oo ah, cusbooneysiinta ugu horreysa ee ugu weyn ee Android 7.0, taas oo shirkaddu hubaal tahay inay bilaabi doonto isla maalinta la soo bandhigayo.
Dhacdadani waxay ka dhici doontaa magaalada San Francisco waxayna ka bilaaban doontaa 18-da maqribnimo gudaha Spain, 11-ka subaxnimo ee Mexico. Laakiin kaliya maahan in taleefannada casriga ah ee cusub ee Google daboolay lagu soo bandhigi doono dhacdadan, laakiin shirkadda Mountain View ayaa sidoo kale la soo bandhigi doonaa. waxay soo bandhigi kartaa Google Home, oo ah aalad ay ku rabto inay kula tartanto shirkadda Amazon ee Alexa. Waxaan sidoo kale arki karnay qaab cusub oo Chromecast ah oo taageero ka helaya tayada 4k. Sidoo kale meesha lagama saarayo in shirkaddu soo bandhigto nooc cusub oo smartwatch ah, oo ah mid kale oo ka mid ah wararka xanta ah ee soo baxayay dhowr bilood, gaar ahaan sannadkan oo shirkadaha waaweyn ee wax soo saara aysan billaabin cusbooneysiinta saacadooda casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Google ayaa soo bandhigi doonta taleefannadeeda casriga ah 4-ta bisha Oktoobar